Iran Oo Xukun Adag Ku Ridday Nin Basaasnimo Lagu Soo Eedeeyay – somalilandtoday.com
(SLT-Tehran)-Waaxda cadaaladda ee Iran ayaa sheegaysa in nin haysta jinsiyadaha Britain iyo Iran, 10 sano oo xabsi ah lagu xukumay ka dib markii lagu soo eedeeyay in uu u basaasayay hay’adda sirdoonka Israa’iil ee Mossad.
Anousheh Ashouri ayaa sidoo kale lagu ganaaxay lacag dhan $36,600.
Xafiiska Arrimaha Dibedda ee UK ayaa xaqiijayay inay taageerayeen qoyska ninkan haysta jinsiyadaha UK iyo Iran.
”Safaaraddeena ku taalla Tehran way sii wadi doontaa codsigeena ku aaddan taageeridda qoyska ninkan la xukumay”, ayuu intaasi ku sii daray xafiiska.
”Sida loola dhaqamo dadka haysta jinsiyadaha kala duwan ee lagu xira Iran, waxaan kiisaskooda ula tacaalaynaa si gaar ah oo ku saleysan heerka ugu sareeysa. Waxaan Iran ku boorrinaynaa in dadkaasi iyo qoysaskooda ay dib u mideeyaan.”
Iran ayaa sannadadii ugu dambeeyay xidhay tiro dad ah oo haysta jinsiyado kala duwan iyo kuwa ajaanib ah, kuwaasi oo intooda badan lagu soo eedeeyay dambiyo basaasnimo ah.
Dadkaasi waxaa ka mid ah Nazanin Zaghari-Ratcliffe oo haystay jinsiyadaha Ingiriiska iyo Iran ayaa sannadkii 2016-kii lagu xukumay shan sano xarig ah.
Dowladda Iran ayaanan aqoonsanayn muwaadiniinta reer Iran ee haysta jinsiyadaha kale.
Xidhiidhka Iran iyo UK ayaa toddobaad yadii ugu dambeeyay aanan wanaagsanayn ka dib markii ay isku khilaafeen maraakiibta shidaalka ee ay kala afduubteen.
Afartii bishii July markab kuwa shidaalka qaada ah ayaa xeebta Gibraltar waxaa ku qafaashay ciidamada badda ee UK, ka dib markii looga shakiyay in uu markabka baal maray sharciyadii cunaqabateenta ee Midowga Yurub kaas oo ahaa in markaabita shidaalka sidda aysan geli karin gudaha dalka Suuriya.
Markabkaasi ayaa la sii daayay 15-kii bishan Ogosto, balse Iran ayaa weli haysata markab kuwa shidaalka qaada ah oo uu ka dulbabanaya calanka Britain, kaaso oo ay Iran qafaalatay 19-kii bishii July.